Ihe Atụ Jizọs Mere Gbasara Osisi Vaịn na Alaka Ya (Jọn 15) | Ihe Ndị Mere ná Ndụ Jizọs
EZI OSISI VAỊN AHỤ NA ALAKA YA
OTÚ MMADỤ GA-ESI NỌGIDE N’ỊHỤNANYA JIZỌS
Jizọs nọ na-agba ndịozi ya ume kemgbe ha na ya na-akparịta ụka. Ugbu a, chi ejimiela, o nwedịrị ike ịbụ n’ime ime abalị. Jizọs meziiri ha otu ihe atụ. Ọ sịrị:
“Abụ m ezi osisi vaịn, ọ bụkwa Nna m kụrụ ya.” (Jọn 15:1) Ihe atụ a Jizọs mere yiri ihe Jehova kwuru banyere ụmụ Izrel ọtụtụ narị afọ tupu mgbe ahụ. Jehova kpọrọ ha vaịn ya. (Jeremaya 2:21; Hosia 10:1, 2) Ma, Jehova agala ịjụ ha. (Matiu 23:37, 38) N’ihi ya, Jizọs na-ekwu banyere vaịn ọzọ. Ọ bụ ya bụ vaịn ahụ Nna ya kụrụ kemgbe afọ 29 o ji mmụọ nsọ tee ya mmanụ. Ma Jizọs kwuru ihe gosiri na ọ bụghị naanị ya ka osisi vaịn ahụ nọchiri anya ya. Ọ sịrị:
“[Nna m] na-ewepụ alaka ọ bụla dị na m nke na-adịghị amị mkpụrụ, nke ọ bụla na-amị mkpụrụ ka ọ na-eme ka ọ dị ọcha, ka o wee na-amịkwu mkpụrụ. . . . Dị nnọọ ka alaka ahụ na-apụghị ịmị mkpụrụ n’onwe ya ma ọ bụrụ na ọ dịgideghị n’osisi vaịn ahụ, otú ahụkwa ka unu na-apụghị ịmị mkpụrụ, ma ọ bụrụ na unu anọgideghị n’ime m. Abụ m osisi vaịn ahụ, unu bụ alaka ya.”—Jọn 15:2-5.
Jizọs kwere ndị na-eso ụzọ ya nkwa na ọ laghachi eluigwe, ọ ga-ezitere ha ihe inyeaka. Ihe inyeaka ahụ bụ mmụọ nsọ. Mgbe ụbọchị iri ise na otu gachara, bụ́ mgbe a wụsara ndịozi na ndị na-eso ụzọ Jizọs ndị ọzọ mmụọ nsọ, ha ghọrọ alaka osisi vaịn ahụ. “Alaka” niile ahụ ga-anọgiderịrị n’ime Jizọs. N’ihi gịnị?
Jizọs kwuru, sị: “Onye nọgidere n’ime m, mụ onwe m anọgidekwa n’ime ya, ọ na-amị mkpụrụ dị ukwuu; n’ihi na e wezụga m, unu apụghị ime ihe ọ bụla ma ọlị.” “Alaka” osisi ndị ahụ ma ọ bụ ezigbo ndị na-eso ụzọ Jizọs ga-amị mkpụrụ dị ukwuu. Nke a pụtara na ha ga na-akpa àgwà otú Jizọs si akpa, na-agwa ndị mmadụ banyere Alaeze Chineke, ma na-eme ka ọtụtụ ndị bụrụ ndị na-eso ụzọ Jizọs. Gịnịkwanụ ga-eme onye na-anọgideghị n’ime Jizọs, ma ghara ịmị mkpụrụ? Jizọs kwuru banyere onye dị otú ahụ, sị: “Ọ bụrụ na onye ọ bụla anọgideghị n’ime m, a na-atụpụ ya dị ka alaka.” Gịnịkwanụ banyere onye nọgidere n’ime Jizọs? Jizọs kwuru, sị: “Ọ bụrụ na unu anọgide n’ime m, okwu m adịgidekwa n’ime unu, rịọnụ ihe ọ bụla unu chọrọ, ọ ga-emekwara unu.”—Jọn 15:5-7.
Jizọs kwughachiri ihe o kwuburu, ya bụ, idebe ihe ndị o nyere n’iwu. (Jọn 14:15, 21) O kwuru ụzọ kacha mkpa ndị na-eso ụzọ ya ga-esi egosi na ha na-edebe ihe ndị o nyere n’iwu. Ọ sịrị: “Ọ bụrụ na unu edebe ihe m nyere n’iwu, unu ga-anọgide n’ịhụnanya m, dị nnọọ ka m debere ihe Nna m nyere n’iwu wee nọgide n’ịhụnanya ya.” Ma, ọ bụghị naanị ịhụ Jehova Chineke na Ọkpara ya n’anya ka a chọrọ ka ha na-eme. Jizọs gwara ha, sị: “Nke a bụ ihe m nyere n’iwu, ka unu na-ahụrịta ibe unu n’anya dị nnọọ ka m hụrụ unu n’anya. Ọ dịghị onye nwere ịhụnanya karịrị nke a, na mmadụ ga-atọgbọ mkpụrụ obi ya n’ihi ndị enyi ya. Unu bụ ndị enyi m ma ọ bụrụ na unu emee ihe m na-enye unu n’iwu.”—Jọn 15:10-14.
N’awa ole na ole Jizọs kwuchara ihe a, ọ ga-eme ihe gosiri na ya hụrụ ha n’anya. Otú ọ ga-esi eme ya bụ na ọ ga-anwụ n’ihi ndị niile nwere okwukwe na ya. Nke a ga-eme ka ndị na-eso ụzọ ya mụta ịhụ ibe ha n’anya otú ahụ Jizọs si hụ ha n’anya. Jizọs agwabuola ha na ọ bụ ụdị ịhụnanya ahụ ka a ga-eji mara ha. Ọ sịrị ha: “Mmadụ niile ga-eji nke a mara na unu bụ ndị na-eso ụzọ m, ma ọ bụrụ na unu enwee ịhụnanya n’etiti onwe unu.”—Jọn 13:35.
Ndịozi Jizọs kwesịrị iburu n’obi na Jizọs na-akpọ ha “ndị enyi m.” O kwuru ihe mere ha ji bụrụ ndị enyi ya. Ọ sịrị: “Ana m akpọ unu ndị enyi m, n’ihi na ihe niile m nụrụ n’ọnụ Nna m ka m mere ka unu mara.” O nweghị ihe a ga-eji tụnyere mmadụ na Jizọs ịbụ enyi, onye ahụ amara ihe ndị Chineke kụziiri Jizọs. Ma ka ha na Jizọs nwee ike ịnọgide na-abụ enyi, ha ‘ga-anọgide na-amị mkpụrụ.’ Jizọs kwuru uru ịna-amị mkpụrụ ga-abara ha. Ọ sịrị: “Nna m [ga-enye] unu ihe ọ bụla unu rịọrọ ya n’aha m, ihe ọ sọkwara ya bụrụ.”—Jọn 15:15, 16.
Ịhụnanya a ndị a bụ́ “alaka” Jizọs ma ọ bụ ndị na-eso ụzọ ya hụrụ ibe ha ga-enyere ha aka idi ihe na-aga ịbịara ha. Ọ gwara ha na ụwa ga-akpọ ha asị. Ma, ọ gwara ha okwu na-akasi obi. Ọ sịrị ha: “Ọ bụrụ na ụwa akpọọ unu asị, maranụ na ọ kpọwo m asị tupu ya akpọọ unu asị. A sị na unu bụ nke ụwa, ụwa gaara ahụ ihe bụ́ nke ya n’anya. Ma n’ihi na unu abụghị nke ụwa, . . . ọ bụ ya mere ụwa ji kpọọ unu asị.”—Jọn 15:18, 19.
Jizọs kwukwara ihe ọzọ ga-eme ka ụwa kpọọ ha asị. Ọ sịrị: “Ha ga-eme unu ihe ndị a niile n’ihi aha m, n’ihi na ha amaghị onye ahụ nke zitere m.” Jizọs kwuru na ọrụ ebube ndị ọ rụrụ ga-ama ndị kpọrọ ya asị ikpe. Ọ sịrị: “A sị na mụ arụghị ọrụ ndị ahụ n’etiti ha, bụ́ nke onye ọ bụla ọzọ na-arụghị, ha agaraghị enwe mmehie; ma ugbu a, ha ahụwo m, kpọọkwa mụ na Nna m asị.” Asị ha kpọrọ Jizọs mezuru amụma dị na Baịbụl.—Jọn 15:21, 24, 25; Abụ Ọma 35:19; 69:4.
Jizọs kwere ha nkwa ọzọ na ọ ga-ezitere ha ihe inyeaka, ya bụ, mmụọ nsọ. Mmụọ nsọ a bụ maka ndị niile kweere na Jizọs. Ọ ga-enyere ha aka ịmị mkpụrụ na ‘ịgba àmà.’—Jọn 15:27.
N’ihe atụ ahụ Jizọs mere, ònye bụ onye ahụ kụrụ osisi vaịn? Ònye bụ osisi vaịn ahụ? Ole ndị bụ alaka ya?
Gịnị bụ mkpụrụ ahụ Chineke chọrọ ka ndị ahụ bụ́ alaka na-amị?
Olee otú ndị na-eso ụzọ Jizọs ga-esi bụrụ ndị enyi ya? Gịnịkwanụ ga-enyere ha aka idi asị ụwa ga-akpọ ha?